Dib u eegista Bluboo S3: astaamaha, qiimaha iyo inbadan! Qiimo leh? | Androidsis
Dib u eeg Bluboo S3
Mar labaad ayaan soo marnay fursad aad si fiican ugu tijaabiso qalab kale shirkadda Bluboo. Markan waxay ahayd markiisa Bluboo S3, tusaale ah in mudnaan iyo sida ku cad qeexitaankiisa farsamo ay muhiim u noqon karto bartamaha.
Waxaan ka ogaanay khibrad taas taleefan casri ah oo awood leh oo leh aragtiyo dhan dhan walba had iyo jeer ma keeno natiijooyinka la filayo. Waxaan aragnay munaasabado kale sida aysan ugu filnayn in la helo "heerka-koowaad" qeexitaannada taleefannada casriga ah si ay u guuleystaan.
1 Bluboo S3, tafaasiil ku filan in la istaago
2 Naqshadeynta iyo qalabka la wajahay
4 Bluboo S3 qeexitaanno farsamo
5 Shaashad weyn iyo xallin weyn
6 Qalabka iyo awoodda Bluboo S3
7 Software dhacsan
8 Kaamirooyinka Bluboo S3 iyo sawir qaadista
9 Batariga Bluboo S3 waa mid ka mid ah xooggiisa.
10 Codku sidoo kale waa halyeeyada
11 Waxa ugu fiican ee aan jecel nahay iyo waxa ugu yar ee aan ka jecel nahay Bluboo S3
11.1 Waxa ugu jecel nahay
11.3 Waxa ugu yar ee aan jecel nahay
Bluboo S3, tafaasiil ku filan in la istaago
Nasiib ayaan u helnay inaan tijaabin karno Bluboo S3 cusub dhowr toddobaad. Marka la eego guud ahaan waayo-aragnimada isticmaale ma xuma. Laakiin waa inaan dhahnaa ma ahan aalad nagu waashay sidoo kale. Waxaa jira taleefannada casriga ah oo badan oo aan isku daynay, kan gaar ahaana kuma guuleysan inuu jacayl ku dhaco.
Waxaan u qeexi karnaa Bluboo S3 inuu yahay Smartphone xoogaa aan dheellitirnayn. Waana sababta oo ah soo saareyaasheeda ma aysan gaarin in waxqabadka mid kasta oo ka mid ah shaqadiisa uu xitaa la mid yahay. Waxyaabaha qaarkood ayaa u muuqda kuwo fiican, qaarna kuwa xun. Annaguna ma helno isku dheelitirka lagama maarmaanka u ah celceliska faa'iidooyinkiisu inay noqdaan illaa heer.
El muuqaalka jirka muujinaya Bluboo S3 cusub uma soo baxo geesinnimo. Waxaan aragnaa in qaybta naqshadeynta aysan qaadan qatar aan loo baahnayn. The Khadadka dhismihiisu waa kuwa ugu caansan, inkasta oo aan ka helnay guddi 6-inji ah xagga hore ee gudaha 18: 9 qaabka ugu hadda. Tusaale cad oo ku saabsan dheelitir la'aanta aan ka hadlayno. Halkan waxaad ka iibsan kartaa Bluboo S3: BLUBOO S3
Naqshadeynta iyo qalabka la wajahay
On hore ee qalabka waxaan ka heli weyn Shaashad 6-inji ah oo uu sameeyay Sharp bixinta qaraar Full HD +. Waxaan aragnaa sida frontal waa mashquul ku dhow boqolkiiba sideetan shaashaddaada. Waxaanan leenahay qayb aad u raaxo badan 18: 9.
Waxaan had iyo jeer jecel nahay inaan helno Nalalka ogeysiiska LED. Qeybta kore, ee ku xigta afhayeenka. Wicitaannada iyo ogeysiisyada kale waxaan aragnaa iftiinka aan u qaabeyn karno oo aan midab ugu beddelan karno sida aan jecel nahay. Sida had iyo jeer aan dhahno, waxaad kaliya ku waayi doontaa LED-yada taleefan markii aad waligaa isticmaasho. Haddii aad horey u isticmaashay, waxaad ogaan doontaa waxa iftiinka fudud ee midabka leh uu fududeeyo waxyaabaha.
Qaabka kaas oo shaashadda isku dhafan lagu dhisay a daawaha birta madow ee xoogga badan. Taabashada waxay umuuqataa mid adag, in kasta oo ay lama huraan noqon laheyd in la arko sida ay uga hor tagto nabarrada iyo waqtiga. Waxaa jira taleefanno badan oo casri ah oo dhibic yar oo flake ah ka soo dhacaya geesaha muuqaalkoodana ay lumiyaan tirooyin badan.
en el dhinaca bidix ku yaal laba badhamo. Mid baa u dheeraaday xakamaynta mugga, iyo mid kayar, oo loo isticmaalo kan quful iyo furid. Qaybta kore waa bilaash. Waxaa ku jira dhinaca midig waxaan ka heleynaa booska loogu talagalay kaararka SIM, y kaarka xasuusta
Iyo in hoose waxaan ka helnaa, bartamaha, waxaana galbineynaa godadka ay ku yaalliin sameecadda iyo makarafoonka, USB isku xira C. Astaamo kale oo horumar ah waxay leedahay isku xiraha casriga ah. Nasiib darrose, tani macnaheedu waa ka saarista dekedda codka ee Jack.
In gadaal Waxaan helnay mid ka mid ah niyadjabka weyn ee Bluboo S3. Maaddada la doortay joojinta qalabka ma jeclin waxba. Waxaan helnay a caag adag in marka loo eego qeexitaanka farsamo ee taleefanka uu yahay mid aad u duugoobay. Xitaa waxaan ku ogaanay xoogaa dhaqdhaqaaq ah jilicsanaanta qaybta dambe haddii aan ku riixno bartamaha.
Dhabar balaastig ah oo tayada noocaas ah si fiican uguma guursan la kamarad sawir leh. Laakiin sidaas darteed waxay go'aansadeen Bluboo S3. Waxaan ku haynaa qaybta dhexe ee dhexe kamarad leh laba lens oo ku taal taagan. Bidixdiisa bidix waxaan ku aragnaa a labalaab Led flash leh awood dhalaal aad u wanaagsan.
Wax yar uun kamaradda ka hoosaysa, oo xitaa ka samaysan qayb ka mid ah bir bir ah oo la geliyo xagga dambe, ayaa ah faraha akhristaha. Goobta aad ugu dhow kamaraddu waxay keeneysaa in marar badan aan ku beerin raadka muraayada.
Markuu sanduuqa furmo, sidii had iyo jeerba, waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aan ka heli karno gudaha. Marka lagu daro aaladda, oo dareemeysa culeys aad u badan markii aad soo qaadatid, waan heleynaa waxyaabo qabow. Had iyo jeer ma helno wax ka badan inta adag ee daruuriga ah, markaa marka soo saaruhu leeyahay faahfaahin dheeri ah, waanu kuu sheegaynaa.
Sida caadiga ah, waxaan leenahay ku amraya fiilada iyo isku xirka xogta, kiiskan oo leh joojinta gudaha Nooca USB C. Iyo waliba isaga qalabka wax lagu beddelo ee korontada ku shaqeeya, kaas oo ku yimaada qaab Yurub ah. Sidii aan kuu sheegnay, Bluboo S3 wuxuu leeyahay gadaal gadaal leh balaastigyo aan ku jeclaan timo. Laakiin haddii aadan weli doonayn inay duugowdo ama ay xumaato, sanduuqa dhexdiisa waxaan ka helaynaa hadiyad kiiska silikoon madow.
Waa inaan dhahnaa kiiska silikooniga ah marwalba waa la qadarinayaa. Kiisku wuxuu si fiican ugu habboon yahay qalabka, laakiin wuxuu ka dhigayaa mid aad u fool xun. Taabashadiisu waa jilicsan tahay, waxayna leedahay qabasho ka fiican aaladda lafteeda. Laakiin sidaan nidhaahno, haddii caagga gadaashiisu uu fool xun yahay. Iyada oo kiiska silikoonku xiran yahay, waxaan jecel nahay taleefanka xitaa kayar.
Waxaan sidoo kale helnay a shaashadda badbaadiyaha aasaasiga ah, maahan muraayad dabacsan, laakiin sidoo kale waa la qiimeeyaa. Waxaan haynaa, sida lafilayo marka qalab doorto inuu caburiyo dekedda maqalka ee 3.5 Jack, oo leh a adabtarada si uu ugu xiro dhagaha sameecadahaaga nooca USB Type C.
Xiiso ahaan, gudaha sanduuqa Bluboo S3 waxaan ka helnaa a Fiilo USB ah oo leh saddex wax soo saar oo kala duwan. Iyada oo aynnu ku xidhi karno qalabkeenna kombuyuutarka mahadnaqa soosaarka USB Nooca C. Laakiin sidoo kale waxay leedahay wax soo saar USB yar, iyo mid kale oo loogu talagalay qalabka macruufka. Wax faa'iido u leh shaki la'aan, taasna sidoo kale waa la mahadiyey.
Bluboo S3 qeexitaanno farsamo
Screen 6-inji Sharp 1080 x 2160 IPS LCD (FHD +)
Nidaamka hawlgalka Android 7
Gacaliye MediaTek MT6750T Octa-Core - 4 x 1.5GHz ARM-A53 Cortex - 4 x 1.0 GHz
Xusuusta ROM 64 GB
Cámara trasera Samsung Dual 21 + 5 Mpx oo leh f / 2.0 CMOS sensor
Kaameerada hore Samsung 13 MP
Batariga 8.500 Mah
Cabbirada 75.5 x 157.8 x 11.6
Qiimaha 199.99 €
Xiriirinta wax iibsiga BLUBOO S3
Shaashad weyn iyo xallin weyn
Shaashadda kor u qaadaysa S3, Bluboo wuxuu doortay inuu yeesho a soo saare leh nasab. Oo waxay doorteen saxiixa Sharp. Hal 6 inch screen loo qaabeeyey saamiga 18: 9 dhinac. Waxeey heesataa qaraarka 1080 x 2160 px, taasi waa in la yiraahdo Full HD +, leh cufnaan ah 402 pixels halkii inji.
Shaashad ballaaran oo leh qaraar in ka badan ku filan oo si buuxda ugu raaxeysanaya waxyaabaha aan ka helno. Sidoo kale in si cad loo arko sawirada iyo fiidiyowyada aan ku qaadi karno kamaradda. Xaqiiqdii cabir wanaagsan, sii kordhaya 5 inji, taas oo aad ugu habboon in la isticmaalo.
At Androidsis waxaan nahay difaac daacad ah shaashadaha waaweyn. Waxaanan ku amaaneynaa shaqada ay qabteen kooxihii ugu dambeeyay ee qaabeynta smartpon. Waan aragnaa sida shaashadaha waaweyn ayaa ku habboon shaashadda taleefannada cabbirka "caadiga ah" ee wax ka yar ama ka yar. Sidaa darteed, inaad awood u yeelatid taleefannada casriga ah oo leh shaashad 6-inji ah oo aan ka weyneyn waa horumar in la qiimeeyo.
Marka laga hadlayo iska caabinta, shaashadda Bluboo S3 ayaa lagu ilaalinayaa Qurxinta Golilla Glass 4. Waxaa naloo xaqiijiyey inaan iska caabinno xagxagashada mana noqon doonno dharbaaxo daran. Cidhifyada shaashadda waxay leeyihiin a qallooc aad u soo jiidasho leh oo ay ugu mahadcelinayaan muraayadda wareegsan ee 2.5D. Iyo galinta shaashadda qaabkeeda runtii si fiican ayaa loo qabtay.
Waxaan sidoo kale jeclaanay geesaha wareega ee shaashadda. Waxay siiyaan muuqaal soo jiidasho leh isha. Waxaanan aragnaa sida labada qaybood ee sare iyo hoose booska weli xorta ahi ugu filan yahay kamarad, afhayeenka, makarafoonka, iwm.
Qalabka iyo awoodda Bluboo S3
Bluboo S3 wuxuu leeyahay processor MediaTek. Markan wuxuu doortay MediaTek MT6750T. Processor Octa-Core, 4 x 1.5GHz ARM-A53 Cortex - 4 x 1.0 GHz. Taasi horeyba waxaa loogu isticmaalay natiijooyin wanaagsan tiro badan oo qalab ah. MediaTek MY6750T oo ah noocyada sida Asus, Oppo, ZTE ama Alcatel ayaa aaminay.
Bluboo wuxuu leeyahay a 4GB RAM taas oo sifiican uxusha qalabku si habsami leh ugu socdo. Si loo dhameystiro RAM-ka, waxaan ka heli karnaa Kaydinta 64GB. Shaki la'aan, tandem wanaagsan si aan loo helin xawaare la'aan iyo meel bannaan oo lagu badbaadiyo waxa aan dooneyno.
Naqshadeynta Bluboo S3 waxay leedahay a GPU sidoo kale si fiican loo yaqaan, ah ARM Mali T860 MP2. Xusuustiisa RAM, awooddeeda keydinta iyo processor-keeda ayaa ka dhigaya taleefan awood u leh inuu qabto hawl kasta. Mana arki doonno goyn ama laalaadinta wax dalab ah ama ciyaar ah.
Sí waxaan awoodnay inaan ogaano, markaan filim ama fiidyow dheelno waqti dheer, waa a kuleyl xad dhaaf ah boosteejada Waqti badan ayey qaadatay markii aan helnay taleefan bixiya kuleylka aadka u badan markii aan "laaday" in muddo ah. In kasta oo hubaal kiiska silikoonku yahay mid aan sidaa u muuqan, haddana qaybta dambe aad ayey u kulushahay.
Mar labaad waa inaan ka hadalnaa a Telefoon casri ah oo cusub oo suuqa ku garaacaya nooc casri ah oo Android ah. Bluboo S3 ayaa leh nooca Android 7.0 mana hayno wax war ah oo ku saabsan wararka soo socda wali. Telefoon kale "wuu dhashay" sanadka 2.018 taasna waxay la shaqeysaa nooc aad uga da 'weyn ee Android.
Aad ayey uga sii culus tahay in la xaqiijiyo in Bluboo S3 uu la shaqeeyo Android 7.0 markaan aragno taas sanduuqa laftiisa, qaybta qeexitaanka, Waxaan aqrinay inay leedahay Android 8.0. Wax aan rajaynayno Bluboo inuu xaliyo sida ugu dhakhsaha badan, ama ugu yaraan cadeeyo. Sababtoo ah waqtigan, ugu yaraan aaladda aan marin u helnay ma lahan nooca ugu dambeeya.
Raali ahaanshihiisa waa inaan dhahnaa wuu haystaa lakab u gaar ah oo ka dhigaya inay u muuqato inaan la shaqeyneyno Android Oreo. Laakiin nasiib darro waa uun muuqaal muuqaal ah. Tani macnaheedu maaha Bluboo S3 si tartiib tartiib ah ayuu u socdaa, mana aha mid duugoobay. In kasta oo mar labaad aanu u malaynayno in Google ay ka sii adag tahay arrintan.
Sida lakabka wax-u-dejinta, ogow inaysan haba yaraatee "duullaan ahayn". Waxaan heli karnaa marin kasta ama qaabeyn. Iyo sidaan uga faallaynay, waa wax lagu farxo in la fiiriyo, aad iyo aad u badan oo mararka qaarkood aan ilaawno inaan isticmaaleyno Android 7.
Kaamirooyinka Bluboo S3 iyo sawir qaadista
Qaybta sawir qaadista ayaa sii kordheysa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan taleefanka gacanta. Si wadajir ah ula socdaan shaashadda, iyo baytariga ayaa go'aansan kara inaan dooranno mid ama qalab kale. Sida taleefannada kale ee casriga ah ee aan awoodnay inaan tijaabinno, warqad ahaan Bluboo S3 waxay leedahay kaamirad wanaagsan. Laakiin tani markasta kuma filna qaybtan inay hesho dhibco fiican.
Bluboo S3 wuxuu leeyahay a kamarad gadaal ah halkaasoo muraayadaha indhaha si toos ah midba midka kale uga sarreeyo. Bluboo waxay u dhiibatay qaybta kamaradaha S3 Samsung. Xaaladdan oo kale waxaan haysannaa kamarad leh 21 Mpx xalinta oo lagu daray 5 Mpx. Oo waxay leedahay a CMOS shidma leh aperture 2.0, ku filan?
Sawirada la qaaday iftiin dabiici ah oo wanaagsan, ka natiijooyinka uu la aqbali karo. The midabada natiijo xoogaa dhergo, oo lagu arkay shaashadda taleefanka waxay u egyihiin xoogaa ka ifaya sida ay dhab ahaan yihiin. Laakiin taxaddaridda xallinta iyo fiiqnaanta waxaan helnaa natiijooyin wanaagsan. Sawir buuxa oo midabyo isku midab ah, dareemayaasha ayaa si fiican inoo tusaya midabada kala duwan.
En sawiro muuqaal ah waxaan ogaanay qaar luminta fiiqnaanta, gaar ahaan iyo sida caqliga ku ah walxaha ka sii fog. Xitaa sidaas uma tixgelin karno natiijooyinka inay xun yihiin helay. The midabo kala duwan tusay waa ballaaran qaababka ugu waaweynna way cad yihiin.
Dhibaatadu waxay ku timaaddaa zoom. Caadi ahaan, tayada sawir leh zoom dijitaal ah ugu badnaan, ayaa lumisa tirooyin badan. Sawirada laga soo qaaday Bluboo S3 waxaan ku aragnaa sida dhalaalka midabada waxaan kaloo ka hadlaynaa xoogaa ayuu ku yaraadaa foomamka. Waxaa laga yaabaa in si loo sifeeyo xal la'aanta aan aragno sida qaababku u lumiyaan xitaa ka sii fiicnaan intii la filayay.
Waxaan sidoo kale jeclaan kuwan saameynta cufnaanta jirka, oo loo yaqaan "blur" qalabkan. Markii aan u adeegsanno waxaan dooran karnaa wax ka badan ama ka yar cabbirka qaybta sawirka oo ku sii jiri doona diiradda. Muhiimadu waxay tahay qalabkani ma ahan mid sax ah. Xitaa dhejinta sawirka ugu muhiimsan ee xarunta, iyo shaashadda shaashadda si aad isugu daydo inaad diirada u saarto wax gaar ah, natiijada ma ahan sidii la filayay.
Anagoo ka hiilinayna kaamirada waa inaan dhahnaa taas oo leh sawirro dhow waxaan ku helnaa qabasho tayo sare leh. Waxaan fiirsanaa fiiqnaan weyn. Runtii xal wanaagsan. Iyo wixii ka sarreeya oo dhan, midab aad u qumman oo midabyo iyo caddayn ah foomamka.
Sida dhinacyada kale ee Bluboo S3, ayaa waxqabadka kamarad sawir waa inoo muuqataa dheelitirnaan la'aan. Waxaan ka helnay natiijooyin aad u wanaagsan dhinacyada qaar, xoogaa niyad jabna kuwa kale. Wanaagu wuu ka fog yahay xumaanta ay kamaradaadu na siiso, taasina waxay ka dhigeysaa celceliska hoos u dhaca si aad ah.
Ku dar in Bluboo S3 uu leeyahay a labalaab laydh LED ah oo awood u leh inuu iftiimiyo tallaaladaada ugu madow. Waa muhiim inaad yeelato iftiin dheeri ah xitaa sawirada iftiinka iftiinka.
In kamarad hore waxaan kaloo helnay a dareeraha ay saxiixday Samsung. Kaas oo leh qaraar aad u wanaagsan oo hufan. Iyadoo kamarad leh 13 Mpx sawiradeenu waxay yeelan doonaan ugu yaraan tayo. Way fiicantahay in la arko in shirkaduhu leeyihiin kamaradda hore oo qayb muhiim ah ka ah qaybta sawirada.
Batariga Bluboo S3 waa mid ka mid ah xooggiisa.
Waxaan horeyba uga faallay bilowgii in Bluboo yahay Smartphone miisaankiisu sarreeyo. Waa wax aan u aragno inay sanduuqa ka baxsan yihiin. Taasina sidoo kale waa la ogaan karaa markaan isbarbar dhigno aaladaha kale. Ama markaan isticmaalno waqti dheer ... runtii wuu cuslaanayaa.
Mana aha aragti shaqsiyeed. Bluboo S3 wuxuu gaaraa 280 g miisaan ah miisaanka. Qaar ka mid ah, waxyaabo gaar ah oo loo isticmaali karo in si toos ah loogu go'aamiyo terminal kale. Laakiin maxaa kuwa kale oo badanna ma haysto tal dhaafsiisan ogaanshaha iyo wixii ka sarreeya dhammaan qiimeynta waxa culeyska noocan ahi sabab u yahay.
Iyadoo a 8.500 mAh baytariga Bluboo S3 wuxuu leeyahay xadhig xoogaa. Xitaa anigoo og inaan wajaheyno Smartphone wata batari weyn, Muddadiisu si farxad leh ayey nooga yaabisay. Iyadoo isticmaalka dhexdhexaadka ah ee qalabka, wuxuu socday ilaa saddex maalmood oo buuxa isticmaalka.
Si loo dhigo laakiin, waxaan tixraaceynaa kuleyl badan waxaan ku tijaabinay Bluboo S3. Markaad muusig ama fiidiyow garaacdo ilaa 30 daqiiqo waxaan ogaaneynaa in qalabka uu aad u kululaado. In kasta oo kor u kaca heer kulka uusan saameyn ku yeelan nolosha batteriga qalabka.
Sidoo kale waa kudar in la yeesho a baytariga taageera xawaareynta degdegga ah. Awood u lahaanshaha isticmaalka aaladda seddex maalmood oo isku xigta, oo u baahan saacad kaliya lacag buuxda waa daaweyn dhab ah. Xeedhoku mar dambe ma noqon doono qalab muhiim ah oo maalin walba la qaado.
Codku sidoo kale waa halyeeyada
Bluboo S3 ayaa leh hal ku hadla dibedda. Wax horeyba u caado u noqday ficil ahaan soosaarayaasha oo dhan. Wax aan u aragno inay qalad yihiin marka la eego guusha af-hayeennada dibadda ee suuqa. Qalab awood u leh inuu soo gudbiyo dhawaaqa sitiyaha iyo awoodda dhawaaqa weyn wuxuu noqon karaa mid suuqa ku dhaca.
Waxaan haynaa taleefan bixiya awoodda codka. ka mugga in gaadho waa ka badan tahay ku filan inuu muusig garaaco oo sifiican u maqal xitaa banaanka. Laakiin taasi waa uun. Dhawaaqa ayaa si cad u soo baxaya iyo ma aanan arag gariir ama dhalanrog. Laakiin waxaa si weyn loogu horumarin karaa iyadoo la haysto laba ku hadla halkii laga heli lahaa mid keliya.
Calaamadee sida fiican waan helnay Tuner FM. Raadiyuhu marna kuma filna aalad boqolkiiba aad u badan loo isticmaalo madadaalo. Iyo in la dhageysto raadiyaha tooska ah iyada oo aan loo baahnayn isku xirnaanta xogta marwalba way fiicantahay.
Dhinaca kale, waxaan ubaahanahay fiilo adabtarada ah si aan u dhagaysto muusikada wali ma jeclin. Ka takhalusida isku xiraha Jack ee taleefannada gacanta ee cusub, had iyo jeer waxaa sabab u ah isbeddelka isku xiraha USB Type C, ma dhammeeyo qancin. Inaad isticmaasho adabtarad haddii aynaan haysan headphones-ka Bluetooth-ka waxay umuuqataa mid dib udhac ka badan horumarsan.
Waxa ugu fiican ee aan jecel nahay iyo waxa ugu yar ee aan ka jecel nahay Bluboo S3
Waa inaan mar kale isku celcelinno, laakiin Bluboo S3, oo leh aragti caalami ah, waxay umuuqataa mid aan dheelitirnayn. Sidaad u aragtay waan helnay dhinacyada ay si fiican u difaacaysoiyo kuwa kale taas oo ay ka sii liidato. Xitaa qodobada qaarkood, sida sawirka, waxaan kaheleynaa kala duwanaanshaha waxqabadka weyn.
Sidaa darteed, si xiiso leh, waxaan ka heli karnaa dhinacyo isku mid ah faa'iidooyinka iyo qasaaraha. Tusaale cad ayaa ah muuqaalka jirka. Qaybta hore oo leh cabirka shaashadeeda, xitaa meesha ay ku yaalliin walxaha dambe ayaan jeclaannay. Laakiin waxaan tixgelineynaa walxaha loo xushay qaybtiisa dambe qalad dufan.
Waxa ugu jecel nahay
La nolosha batteriga shaki la’aan waa mid ka mid ah qodobada ugu adag. In aalad awood u leh inay taageerto laxankayaga in ka badan laba maalmood oo buuxa waa wax weyn. Iyo haddii ay xamuulka batarigan waxaa lagu fuliyaa a soonWaa hagaag, aad uga fiican.
El cabirka shaashadda waa guul. Waxaan jeclaanay inaan ku aragno shaashad 6-inch ah oo ku jirta taleefan Smartphone ah oo la awoodi karo. Taasna sidoo kale waxay leedahay a xalin wanaagsan si markaa khibrada adeegsaduhu ugu qanco intii suurtogal ah.
Waxaan marwalba tixgelinaa "pro" inaan taleefan ku leenahay Idaacadda FM. Muusikada, wararka, barnaamijyada, dhammaantoodna annaga oo aan isticmaalno iyada oo aan la isticmaalin xogta dhibaato.
Waxa ugu yar ee aan jecel nahay
Miisaanka waxay noqon kartaa caqabad. Suuqa ay ku tartamaan nolosha batteriga iyo naqshadeynta taleefanka aadka u caatada ah, Bluboo wuxuu si cad ugu socdaa nolol batteri oo waarta. Tanina waxay ka dhigeysaa inay gaarto culeys ah 280 g. Qaar xad dhaaf ah, kuwa kale u dulqaadan kara, laakiin miisaan culus oo isku mid ah.
El diirimaad in Bluboo S3 ay soo marto markaan isticmaalno waqti dheer aan walwal naga qabno. Kaliya ka ciyaarista filimka Netflix, ama muusigga ka ciyaara Spotify nus saac, taleefanka ayaa kululaanaya. Aragtidayada ka badan koontada.
El faraha akhristaha marwalba waa saaxiib wanaagsan. Way ku habboon tahay in si dhakhso leh loo furo qalabkeenna. Iyo amniga taleefanka waa ku daritaan muhiim ah. Xaqiiqdu waxay tahay in akhristaha faraha ee Bluboo S3 ma aha wax "fiican". Waxaan u baahanahay akhrino ka badan inta aan jeclaan laheyn inaan telefoonka furno. Waxay noo muuqataa aan fiicnayn oo gaabis ah.
miisaan xad dhaaf ah
sumcad darro akhristaha faraha
Haddii Bluboo S3 ay ku qancisay, waad ka iibsan kartaa halkan: BLUBOO S3.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Dib u eeg Bluboo S3